WordPress Template: Kwusaanụ Ozi Ọdịnihu dị ka Ihe Na-abịa
Wednesday, June 2, 2010 Satọdee, Nọvemba 28, 2015 Douglas Karr
Anyị wuru WordPress micro-saịtị maka Gingde blọgụ maka Dummies ma choro inwe ngalaba ebe anyi gosiputara ihe na abia na ala sidebar. Ihe ngwọta iji mee nke a bụ n'ezie ihe dị mfe ma wuo ya na WordPress. N'ime isiokwu gị, ịnwere ike ịgbakwunye akaghị naanị ajụjụ na igosipụta ọkwa n'ọdịnihu maka otu ụdị aha ejiri naanị maka Ihe Omume Ọdịnihu:
<?php query_posts('order=ASC&pusi = 3 & post_status = ọdịnihu, bipụta '); ma ọ bụrụ na (have_posts ()): mgbe (nwere_posts ()): the_post (); ọ bụrụ na (strtotime (get_the_time ("F jS Y"))> oge ()): gaa n'ihu; ozo: ikwughachi $ post-> id; >>
A na-etinye usoro query_posts tupu loop WordPress iji belata posts ndị e bipụtara na njụajụjụ eji. Ebe ọ bụ na ndị a bụ ndokwa blọgụ ga-eme n'ọdịnihu (na ụbọchị mmemme), ịkwesighi ichegbu onwe gị maka a na-egosipụta ha na blọọgụ gị na ndebiri gị. Nwere ike ịchọ zoo edemede gị ndepụta otu, ezie. Enwere ike mezuo nke a site na idezi ndepụta otu gị na ndebiri WordPress gị site na iji nhọrọ ewepụ:
Anyị gbakwunyekwara metadata maka post iji gosipụta ọnọdụ maka mmemme ahụ. Emezuru nke a site na iji WordPress 'Ngalaba Ubi Omenala. Naanị pịnye ọnọdụ maka aha ubi na ọnọdụ gị maka uru… wee weghachite ọnọdụ maka ngosipụta site na iji iwu get_post_meta dị n'elu.
Saịtị butere mara mma nke ọma, yana ụdị pụrụ iche na ịhazi ya nke nwere ihe niile dị mkpa iji kwalite akwụkwọ a:
Tags: iheọdịnihu postsWordPresswordpress ihewp_list_categories
Kedu ihe njikarịcha Nchọgharị Nchọpụta?
Jun 5, 2010 na 11:24 AM
Anyị jikwa nri ọdịnala wuo ihe ga - eme n'ọdịnihu ma weghachite ọgbọ XML sitemap iji bipụta akwụkwọ n'ọdịnihu. Ọ bụrụ na ị na-eji Arne Brachenwald XML Sitemap Generator, akara 1747 nke sitemap-core.php nwere ike imelite na $where.=” (post_status IN ('publish','future') AND (post_type = 'post' OR post_type = ”)) “;
Ọkt 15, 2011 na 9:36 PM
Anọ m na-achọ ụdị enyemaka a, mana akara nke mbụ ebipụla tupu e wuchaa ya. You nwere ike biputere ahịrị nke mbụ n’azịza ajụjụ a?
Ọkt 16, 2011 na 9:48 PM
Ndo banyere nsogbu ahụ! Emeziwo m post ahụ ka koodu ahụ wee pụta ìhè!